Intlawulo yanyanga le 21 € – 70 € 58 € – 152 €
Ishishini 40 € – 87 € 80 € – 180 €
Amacandelo oDidi lwesibini akakho kude kakhulu kwiKlasi yokuqala kwintuthuzelo. Ukwengeza, izihlalo kwigumbi lodidi lwesibini zibhetele kunezihlalo zeenqwelo moya. Ukongeza, zi-ergonomic, yiza nentloko, kwaye zigqunywe kwilaphu elinefomathi. Oku kwenza ukuba uhambe uhambo olude lomgama.
Ngokubhekele phaya, abakhweli kwiklasi yesibini banokufikelela kwezinye zeenkonzo kwiklasi yokuqala kodwa benemida. Thatha iWI-FI umzekelo. Kwiklasi yesibini, I-Wi-Fi ayinamkhawulo njengoko injalo kubahambi beklasi yokuqala. Abakhweli abakumgangatho wesibini nabo abanako ukufikelela kumaphephandaba emihla ngemihla ngaphandle kwentlawulo ke ukuba ungathanda ukufumana iphephandaba kwiklasi yesibini, Kuya kufuneka uthenge enye.
Abaphethe ukugqithiswa kukaloliwe bangandwendwela iindawo ezithile zebhonasi ngaphandle kweJamani (eSalzburg, eVenice, no Brussels)
Ukugqitha kwi-Eurail kuvumela abantu abangengabo baseYurophu ukuba bahlale ngaphandle kweRussia, IYurophu, kunye neTurkey yokuhamba ngokungapheliyo kwiYurophu. Ezinye izinto zibandakanya:
EMunich ukuya koololiwe baseSalzburg
Ukufika, Oololiwe be-ICE fika ku 11 Izikhululo zaseJamani kunye nesikhululo esinye seSwitzerland. kwakhona, Izikhululo zokufika eziphambili zibandakanya i-Oberhausen, IDuisburg, eDusseldorf, Cologne, Isikhululo senqwelomoya saseFrankfurt (Isikhululo senqwelomoya esikhulu saseFrankfurt), Manheim, Siegburg, kunye nabanye.
Ngokubhekele phaya, IDusseldorf sisixeko esihle esikwiRhine esinembali etyebileyo yenkcubeko kunye nokuziva. Zininzi izinto ezinomdla zenkcubeko kunye nembali ezinokubonwa kwaye imizila ebukekayo ukuhamba kunye nendawo enkulu yokuthenga. Yindawo efanelekileyo ye impelaveki ibalekile nabahlobo okanye usapho.
Ukuqeqeshwa kwe-ICE kwindawo yokutyela apho imenyu iqulethe ukutya, ukutya okulula, notywala bazo zonke iintlobo. Ngaphezu, kukho amachweba okutshaja ecaleni kwesihlalo ngasinye, WiFi yasimahla (engenamda kwiKlasi yokuQala), kunye nee-amplifera zokwamkela iifowuni ezingafumanekiyo (yeklasi yokuqala).
Ekugcineni, Ukuba ufikelele ngoku, uyazi yonke into ekufuneka uyazi malunga noololiwe be-ICE kwaye bakulungele ukuthenga itikiti lakho lohambo lwe-ICE GcinaATrain.com.